Inona no atao hoe CPM? | Martech Zone fanafohezan-teny
Martech Zone » fanafohezan-teny » Fanafohezana manomboka amin'ny C	» CPM
CPM no fanafohezana ny Vidiny isan-kilaometatra.
Cost-per-Mile (na sanda-isaky ny arivo) dia fomba iray hafa ampiasain'ny mpamoaka mba handoa vola amin'ny dokam-barotra. Ity fomba ity dia mitentina isaky ny 1000 impressions (M dia isa romanina ho an'ny 1000). Ny mpanao dokam-barotra dia voaloa isaky ny hita ny dokany, fa tsy hoe impiry izy no kitihina.